Nahazo tso-drano tamin’ny filoha mpanorina ny antoko, Marc Ravalomanana ny lehilahy ary vonona hitondra ny fanevan’i Manjakandriana amin’izay fifidianana izay. Efa za-draharaha amin’ny fitantanana ny tenany tamin’ny toeram-piasany teo aloha, ary mbola nohamafisiny izany nandritry ny naha-filohan’ny DisTim azy tao anatin’ny distrikan’i Manjakandriana hatramin’izao. Nambaran’ity kandida solombavambahoaka ity, fa hanarina ny lesoka ary hitondra fampandrosoana amin’ny lafiny rehetra ny tenany. Eo aloha raha ny nambarany ny sehatry ny fampiroboroboana ny tantsaha amin’ny fanohanana azy ireo, eo ny tanora amin’ny filàny sy ny tokony hijerena azy ireny eo amin’ny fampitaovana sy ny fiofanana, fa eo indrindra ihany koa ny ray sy ny renim-pianakaviana miatrika ny fiainany. Manamafy ny hanasoa ny vahoaka sy hitondra ny teniny ity kandida ity. Vonona hatrany, ary tsy miandry ela fa avy hatrany dia roso ny dia raha ny nambarany satria Manjakandriana dia loha-laharana foana hatramin’izay, ary fanoitra miakatra ho fampandrosoana an’i Manjakandriana sy ny manodidina no tanjona amin’izao maha-kandida solombavam-bahoaka an-dRandriamanga William Henri ao Manjakandriana izao.